FAQs - Ningbo YH hydraulic milina Factory
Inona no atao hoe fanatitra YH?
YH hydraulic dia manolotra feno ny hydraulic tsipika vokatra tsara izay Fittings, hoses, ferrules, adapters, milina, Hose fivoriambe, ary ny hafa mifandray vokatra. Isika mandray anjara amin'ny famokarana zavatra an'arivony nandritra ny taona maro. Manana ekipa matihanina miasa mba hampitombo ny vokatra vaovao toy ny tsena ilaina. Afaka manolotra asa fanompoana OEM amin'ny santionany, sary, na fitakiana aseho. Ary isika dia manolotra tolotra tsara indrindra toy ny avy hatrany ny valin-mailaka, fifadian-kanina vokatra delivery, matihanina hamaha ny olana, rehefa varotra tsara kokoa ny fanompoana, sns
Inona no atao hoe politika ny santionany?
YH hydraulic dia sariaka sy mpanao raharaham-barotra cooperator. Fa ny fiaraha-miasa voalohany, dia efa nentiny avy santionany politika izay miasa tsara noho ny fanaraha-maso ny kalitao.
Tsy ampy ho an'ny Fittings 5pcs, ferrules, ary adapters dia maimaim-poana ho an'ny toe-tahiry.
Tsy ampy 1m ho an'ny hoses dia maimaim-poana ho an'ny toe-tahiry.
Momba ny handefa vidiny, dia tsy maintsy mialoha karama, Maneho kaonty nanome, na mandray karama eo anilanao. Raha manana olana izany, dia afaka miresaka momba.
Ao YH, manana teny ampiasaina telo malaza izay
1). 100% T / T mialoha
2). 30% T / T mialoha, 70% T / T alohan'ny fanondranana (na an'i Bill ny entana)
3). Hentitra no tsy miovaova L / C ao amin'ny fahitana
hafa ihany koa teny misy amin'ny YH hydraulic, azafady katsaram-panahy manoro hevitra ny varotra.
Inona avy ireo fitaovana ny Fittings, ferrules sy adapters?
Fittings sy ny adapters avy tamin'ny 45 carbone vy
Ferrules avy tamin'ny 20 carbone vy (malemy fanahy vy).
Fitaovana hafa dia misy toy ny Stainless vy, varahina, aliminioma, sns azafady Fa manoro hevitra ny varotra noho ny fangatahana manokana mialoha.
Ahoana no YH fanaraha-maso ny vokatra tsara?
YH Manizingizina ny mitady toetra tsara nandritra ny taona maro tao amin'ny saha hydraulic. Avy amin'ny fividianana ny vokatra ara-nofo nampirina entana, dia miezaka ny hanao ny tsara indrindra. Mampiasa ny tsara indrindra hatsaran'ny fitaovana (45 karbaona vy sy 20 karbaona vy) izay novidina avy ofisialy vy orinasa. Ny mpanara-maso no manamarina ny lafiny tsara tokony ho in-efatra nandritra ny CNC fanamboarana. Rehefa avy fanitso nopetahany takela, vokatra vita dia hatao ny fonosana sampan-draharahan'ny. Fonosana mpiasa dia jereo ny mba be, Esory Burr anatiny sy entana mba ao amin'ny baoritra.
Carbon Steel hydraulic Hose Fittings, mimetatra Pex Sodina barahina Fittings , Hose Crimping Machine , Fittings Hydraulic, hydraulic Hose mety tsara , Carbon Steel hydraulic Fittings , rehetra Products